Tixraacyo si loo abuuro mashruuc farshaxan abuur leh | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Dhiirrigelinta, Khayraadka
ka tixraacyada si loo abuuro mashruuc jaantus ah ama nooc kasta oo mashruuc ah waa lagama maarmaan in la gaaro natiijo wax ku ool ah, markii la yimid Internet Adduun dhan oo ah macluumaad garaaf iyo aragtiyeed ayaa furmay oo naga caawin kara inaan horumarinno kuweenna mashaariicda. Laga soo bilaabo shabakadaha bulshada ilaa bogag ku takhasusay farshaxanka garaafyada iyo shabakado hal abuur leh, Internet Waa xulaf weyn in la ballaariyo macluumaadka oo aan saaxiib la noqonno.
Markaan ka hadlayno tixraacyada waxaan ka hadlaynaa koobiyeynta, tixraac wax kale maahan war hel mowduuc horay loo xaliyay ka hor iyadoo ujeedadu tahay u adeegso sidii wax kiciya si loo horumariyo mashaariic cusub. Haddii aan ka soo qaadanno tixraacyo astaan ​​ku saabsan waaxda badda, waxa aan raadineyno maahan in aan nuqul ka sameysno astaantaas laakiin waa in aan aragnaa sida ay u xalliyeen fikradda ah in aan matalo fikradeena "bad" qaab ahaan qaabab, qaabab, qaab, iwm. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadanno astaanta Nike waxaan aragnaa inay u taagan tahay xawaaraha seefta goynta dabaysha, sidaa darteed waxaan u qaadaneynaa in isboortiga uu xawaaraha la xiriira. Waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah marinnada ugu isticmaalka badan markaan raadineyno tixraacyo garaaf ah.
Markay tahay inaan dagaal warqad maran waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoyo hal-abuurka si maskaxdeenna kicine iyo ku baraaruji awoodeena hal-abuurnimo, tan awgeed waxaan u haysannaa siyaabo kala duwan fiiri tixraacyada muuqaalka ah. Waxaan ka raadin karnaa tixraacyada habka ugu dhaqanka badan: madxafyada, buugaagta, joornaalada ... iwm ama waxaan ka sameyn karnaa bogag khaas ah oo ujeedadan leh. Laga soo bilaabo shabakadaha bulshada ilaa bogagga si gaar ah loogu talagalay laanta hal-abuurka waxay noo fidiyaan fikrado aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay mashaariicda mustaqbalka.
Aan aragno waxyaabaha soo socda marinnada tixraaca:
Pinterest (tixraacyada dhammaan noocyada)
Behance (Shabakada Adobe creatives)
Tumblr (bulshada iyo farshaxanada)
Mid kasta oo ka mid ah bogaggaggan wuxuu na siiyaa tixraacyo iyo suurtogalnimada in a xisaabta bilaash ah iyo inaad awood u yeelatid inaad marwalba la socoto arrimaha garaafyada.
Markii aan raadineyno tixraacyo, marwalba waxaan sameynaa inaan ka fikirno waxa aan horay u dooneyno Muxuu ku saabsan yahay mashruucu? Maxaan ubaahanahay Ma jiraan wax la mid ah? Isweydiinta su'aalaha ku saabsan waxa aan dooneyno ayaa na caawin kara raadi tixraacyo si hufanTusaale ahaan, ku raadinta tags waa hab fiican oo lagu dhiirrigeliyo arrimaha la xiriira mashruuca aan maskaxda ku hayno. Ka soo qaad haddii aan daneyneyno abuuritaanka sawir / montage / shaqo garaaf ah oo ku saleysan sal-dhigida, si aan u helno tixraacyo nagu filan waxaan ku raadin karnaa ereyga «Surrealism» sida tag In bogga Pinterest (ama wixii kaleba) raadintaan waxaan kuheli doonaa tixraacyo guud halkaas oo aan kaheleyno dhamaan noocyada mashaariicda leh sumadan, waxa ugufiican waa in aan ilaalino fanaaniinta qaaska ah ee aan kusoo aragnay baaritaankaan guud ee koowaad.
Sidaa darteed, markaan raadineyno tixraacyada garaafka, ujeedku waa inaan ku sameyno sida soo socota:
Marka hore, guud si loo helo a la raadso fannaaniin badan inay taabtaan mawduucaas.
Labaad, diiradda saaray farshaxan gaar ah si aad u raadiso isla qaab.
Pinterest isu rogo ahaansho a xulafo awood leh maaddaama ay tahay shabakad bulsheed oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u abuuraan loox (album) ah oo leh mawduuc ku saabsan mowduuc gaar ah, sidaas darteedna had iyo jeer haysato buugga shakhsiga ah. Haddii aad rabto inaad haysato noocyo kale oo tixraacyo garaafyo iyo ilo ah waad akhrisan kartaa tan boostada.
Ka raadi tixraacyada leh ujeedadiisu tahay inay na dhiirigeliso si loo arko sida ay u xaliyeen mawduucyada garaafka fikradaha kala duwan waa wax aan ku xallin karno iyada oo loo marayo bogagga noocan ah. Ka soo qaad haddii aan u baahanahay inaan ku sameysano astaan ​​badda waxaanan dooneynaa inaan ogaano sida ay horey ugu xaliyeen dhibaatadan jaantus ahaan, tan darteed waxa aan sameyn karno waa inaan ku qorno Pinterest Sumadda "astaanta badda" ayaa na siin doonta tixraacyo badan oo ku saabsan astaamaha ku saabsan mowduucan la xiriira badda waxayna naga caawin doontaa si fiican u arag aragtida.
Ku raadi qaybaha waa wax had iyo jeer wax badan caawiya markay tahay helitaanka tixraacyo ku saabsan mowduucyo gaar ah, madal deviantart Waxay leedahay mashiin raadinta tixraacyada naga caawin doona inaan raadino waxyaabo gaar ah.
Qaab kale oo ah raadso tixraacyo waa in laga sameeyo ka our saaxiib weyn Google Iyadoo loo marayo raadinta guud ee mowduuca, tusaale ahaan haddii aan dooneyno inaan fulino mashruuc sawir gacmeed ah waxaan ku qori karnaa Google: farshaxanleyda surrealist, ka dib waxaan qori doonnaa magacyadaas waxaanna ka raadin karnaa bogagga hore loogu soo arkay qoraalkan.
Wax kastoo mashruuceena ah, waxaan haysannaa fursado badan oo aan ku dhiirrigelinno kuna dhiirrigelinno maskaxdeenna raadinta xalalka hal-abuurka ahKa faa'iideysiga awoodda shabakadaha waa wax ay tahay in aynaan dhaafin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tixraacyada abuurka mashruuc garaaf ah
Sida Loo Sameeyo Mashruuc Tafatireed Adoo Isticmaalaya Bogagga Master-ka ee Indesign
Ku soo celi sawir duug ah Photoshop